Cosy Random Stop-off (Igumbi labucala)
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguGavin
Molo, ndinguGavin, ndijonge phambili ekudibaneni nabantu abatsha kuhambo lwabo lobomi.
Ukubonelela ngegumbi labucala le-attic (umgangatho ongowabo) kwiTerrace encinci ethobekileyo kwisitrato esinecobbled. Ndiyakonwabela ukuyila kwaye ndazama ukwenza indawo enesitayile kodwa ngokuyintloko epholileyo.
Kukho iti/ikofu kunye neebhiskithi kwigumbi. Inomabonakude owakhe, oqhagamshelwe kwiNetflix, amajelo e-catchup, akhiwe kwi-DVD player kunye nokukhethwa kweeDVD ukugcina undwendwe lonwabile.I-WiFi YAMAHHALA (isantya esiphezulu). Ibandakanya indawo yokupaka yasimahla, kunye nekhitshi ekwabelwana ngalo kunye negumbi lokuhlambela.
Ukulungelelaniswa kwendawo yokuhlala, ukungena kwangethuba kunye nokuphuma kade kunokulungiselelwa umrhumo omncinci owongezelelweyo. Nceda uthumele umyalezo kumamkeli ngeenkcukacha.
4.94 · Izimvo eziyi-268
Ipropathi inikeza indawo yokupaka simahla esitratweni nakuzo zonke izitalato ezingabamelwane.
Lo mhlaba ukwimizuzu eli-10 kuphela xa uhamba ukusuka kuhola wendlela uM6 (ukudibana kwama-42 okanye ama-43) Kufuphi nombindi wedolophu kunye nohambo lwemizuzu eli-15 okanye uhambo lwebhasi emi-5 (imizuzu emi-5 ukuhamba ngeenyawo ukuya kwisikhululo sebhasi nako).
Kwimizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka kwipropathi uya kuxhamla nakwindawo yokubhaka yasekhaya, ivenkile yesandwich, ikhefi yendlu yekofu, izinto ezithathwayo (ivenkile yetshiphu, iTshayina, neIndiya), iposi, ivenkile enkulu evula kude kube ngu-11pm rhoqo ebusuku. Kukwakho nendawo yokwenza umthambo ongaphantsi kwemizuzu eli-10 xa uhamba ngesantya sokuphumelela undwendwe akhoyo, i-bowling alley, iholo yesnooker, ikhemisti, abalungisi beenwele abathathu kunye nesikhululo sepetroli (esivulwe ubusuku bonke).
Umbindi wesixeko ubonelela ngeevenkile ezininzi, ithala leencwadi, iikhefi ze-Intanethi, ii-pubs, iibhari, iindawo zokutyela, indawo yokuqubha, icinema, imyuziyam, imitsalane yembali. Nayiphi na eminye imibuzo / iingcebiso / iingcebiso nceda uqhagamshelane nam nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho.
ICarlisle sisixeko esikhulu, esigcwele imbali. Izinto ezikhangayo ezifana neNqaba, iMyuziyam yendawo (iTullie House), iCathedral kunye nohambo olufutshane ukuya eHadrian Wall.
Umbuki zindwendwe ngu- Gavin
Ukuba ndikhe ndakhululeka ndihlala ndifumaneka kwaye ndonwabile ukuzibandakanya okanye ukuchitha ixesha neendwendwe zam. Oku kunokuthetha incoko edlulayo, ikomityi yeti, ukonwabela ukutya kunye okanye ukuhambahamba (kunye neendwendwe ezitshatileyo ukubhuqa kuMarioKart)
Amaxesha amaninzi iindwendwe zam zonwabela indawo yazo zilapha ukuze ziphumle emva kosuku olude lokuphonononga. Indlu yindawo ezolileyo elungele kakuhle ezi zidingo, ukuze abantu baphinde batshaje ngelixa belapha.
Inombolo yam yenziwe ukuba ifumaneke kwiindwendwe zam kwaye ithunyelwe ngentsasa yokubhukisha ukuze bafumane uncedo ngazo naziphi na iimfuno abanokuba nazo.
Ukuba ndikhe ndakhululeka ndihlala ndifumaneka kwaye ndonwabile ukuzibandakanya okanye ukuchitha ixesha neendwendwe zam. Oku kunokuthetha incoko edlulayo, ikomityi yeti, ukonwabela…